I-Bella Vista River House 🌅 - I-Airbnb
I-Bella Vista River House 🌅
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguAngelo Douglas
UAngelo Douglas yi-Superhost
Yiza uhlale kwiintaba ezintle ezingapheliyo kunxweme lomlambo, kunye ne-privay yangasese ngqo emlanjeni.
Ipropati ineembono ezingapheliyo zomlambo zomlambo kunye nentlambo. Umbono ovela kwibalcony ukhethekile "Bella Vista" kwaye ikhaya lixhotyiswe kakuhle ukuhlala ixesha elide okanye elifutshane!
Silandele ku-Instagram @bellavistariverhouse
Nceda uqaphele ukuba ubuncinci bemfuno yethu yobuncinci kundwendwe olunye yiminyaka engama-25 ubudala.
UKULOBA I-KAYAK PARADISE! IKHAYA LERIVERFRONT KUMLAMBO USUSQUEHANNA. Hamba ngqo emnyango amanyathelo ambalwa ukuya emlanjeni ukuya kwi-Kayaking, ukuloba, ibhodi yokubheqa okanye ujabulele nje iimbono zomlambo omhle kunye nezilwanyana zasendle.
Relax kweli khaya lihle labucala libekwe kuMlambo iSusquehanna kwiintaba ezingapheliyo, ziiyure ezi-2 kuphela ukusuka eNew York nasePhiladelphia.
Le asiyondlela yakho eqhelekileyo yokurenta kwidolophu yasekuhlaleni. Eli khaya lihle likwi-Wyoming County ezolileyo nenoxolo, kufuneka libonelwe abo banqwenela ukuziva ngathi likhaya emlanjeni okanye echibini kunye nabo bonke ubutofotofo bekhaya elitofotofo.
Indlu inomgangatho omnye womgangatho we-2, ikhitshi elikhulu elixhotyiswe ngokupheleleyo, kunye neveranda enkulu evulekileyo ejonge umlambo omhle waseSusquehanna-ulungele amaqela amakhulu.
Ikhaya likwabonisa igaraji kunye nepaseji evulekileyo phantsi kwekhaya, i-charcoal grill "Isitayile saseBrazil saseRotisserie", i-gas grill. I-master suite enebhedi enkulu, igumbi leendwendwe elinebhedi yokumkanikazi, elinye igumbi leendwendwe elineebhedi ezi-2 ezigcweleyo, kunye negumbi lokulala elineebhedi ezi-2 zabantwana. Ukulala i-10 ukuya kwi-12 kwiibhedi ezahlulahlulwe phakathi kwamagumbi okulala ama-4 kubandakanya ukumkani om-1, ukumkanikazi om-1, ubungakanani obu-2 obugcweleyo kunye neebhedi ezi-2. Igumbi lokuhlala elihonjisiweyo langoku elineseti yeebhedi apho ungahlala khona ukuze ucamngce ngombono omangalisayo womlambo iSusquehanna, i-46in yescreen esisicaba seTV, kunye neWi-Fi ekhoyo. Ikhaya lalungiswa ngokupheleleyo, kukho amagumbi okuhlambela amabini ahlaziyiweyo enye kwi-Master suite inika ubumfihlo obugqibeleleyo kwizibini ezitshatileyo; igumbi lokuhlambela lesibini ligumbi lokuhlambela leendwendwe elinebhafu.
Ilungele ukuloba, ukukhwela inqanawa, ukukhwela inqanawa, ukuqubha okanye ukuphumla nje! Le yeyona ndawo yokubalekela kwiiNtaba ezingapheliyo.
NgoMlambo iSusquehanna kanye kumnyango wangaphambili, unokuqaliswa kwesikhephe sabucala ukusuka kwindlela yokuqhuba.
Imbonakalo yePanorama yoMlambo iSusquehanna kuzo zonke iindawo zepropathi. Iveranda engaphambili ejonge umlambo. Igrill yanamhlanje enepropane kuzo zonke iimfuno zakho zokugcoba.
Izinto eziluncedo zangaphakathi ziquka: Umatshini wekofu, itoaster, iilitha ezi-5 zokuhambisa amanzi ngamanzi ashushu nabandayo, umatshini wokuhlamba izitya, imicrowave, isitovu, kunye nefriji enkulu.
Ukufikelela ngasemlanjeni ngokusungulwa kwesikhephe sabucala, iipaki zikawonke-wonke, iinkundla zebhasikithi, ivenkile yokutyela/ibha, ideli kunye nesikhululo segesi konke kuhambo lwemizuzu emibini! Ukufikelela kwii-kayak, iibhodi zokugwedla, iirafti, izixhobo zokuloba kunye negrill. Ikhaya linokunyanzeliswa koMoya kunye noKufudumeza kwaye yenye yeeveranda ezintle ezijonge emlanjeni.
UFIKELELO OLUPHELELEYO lubandakanya: I-wifi yasimahla kunye ne-46" HDTV kunye nabo bonke ubutofotofo bekhaya. Zonke iinxalenye zendawo yokupaka ezitalatweni, iimoto ezi-4, ipatio engaphantsi kwendlu yokungena emlanjeni ukusuka kwindawo yokuhlala. , ijungle gym, i-zip encinci kunye neetafile zepikiniki ezigqunyiweyo Ukufikelela kwiikayak, iibhodi zokubhexa, iirafti, izixhobo zokuloba kunye negrill. Ikhaya lineveranda entle ejonge emlanjeni.
Sikwazilungelelanise nenkonzo yeSikhokelo se-Al's Susquehanna esona sikhokelo somlambo sigqibeleleyo kule ndawo! Ndiye ndaloba naye izihlandlo ezili-10+ kwaye ndibamba rhoqo iintlanzi ezingama-20 ukuya kwezingama-30 kuhambo ngalunye. Ukuba uyathanda singakunceda wenze amalungiselelo okuba ubhukishe kunye naye okanye umchazele ukuba simcebise ukonga okongeziweyo! Incwadi ngokukhawuleza njengoko ishedyuli yakhe yasehlotyeni ibhukishwa ngokukhawuleza!
Iinkcukacha zePropati: Le ndlu ikwindawo yasemaphandleni engenazo izinto zoluntu. Amanzi asetyenziswa kwiqula elombiweyo.
Olunye lolona kuloba lubalaseleyo ePennsylvania nakuMntla-mpuma kukuMlambo iSusquehanna. I-Musky, i-walleye, i-Bass kunye ne-catfish zimbalwa kwiintlanzi ezininzi ezibanjwe elunxwemeni kwaye zijikeleze umlambo. Izikhephe zinokusungulwa ukusuka kwindlela yabucala yepropathi.
Olunye lolona kuloba lubalaseleyo ePennsylvania nakuMntla-mpuma kukuMlambo iSusquehanna. I-Musky, i-walleye, i-Bass kunye ne-catfish zimbalwa kwiintlanzi ezininzi ezibanjwe elunxwemeni kwaye zijikeleze umlambo. 20 imizuzu ukusuka Casinos kunye Restaurants.
Umbuki zindwendwe ngu- Angelo Douglas
Ifumaneka kakhulu kusasa xa undwendwe lufuna uncedo kunye okanye iingcebiso.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Falls